म मनमोहनलाई प्रश्न सोधेको मान्छे::netpatrika
म मनमोहनलाई प्रश्न सोधेको मान्छे
मङ्लबार, चैत्र १८, २०७०
प्राय: नेताहरूको अन्तर्वार्ता लिने धमला पारससित असुहाउँदो उत्तेजक हाउभाउमा प्रस्तुत भएका छन्, जसलाई क्रिकेट र पारसका फ्यानहरूले रुचाएनन् । यद्यपि यो उनको परम्परागत शैली हो । अन्तर्वार्तामा धमलाले सोधेका कतिपय प्रश्नहरू हचुवा, असान्दर्भिक मात्र नभएर हास्यास्पदसमेत छन् । केही प्रश्नबाट ऋषिसित क्रिकेटको ज्ञान सीमित भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यसै सम्बन्धमा आजको नयाँ पत्रिकाले पत्रकार ऋषि धमला सँगको अन्तर्वार्ता छापेको थियो:
तपाईंले पारससित लिएको अन्तर्वार्ता सामाजिक सञ्जालमा खुबै आलोचित भइरहेको छ नि ?
हो, मलाई थाहा छ । एउटा कुरा के बुझ्नुस् भने, यो मेरो जीवनको पहिलो अन्तर्वार्ता होइन । मैले राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि दरबार छोड्ने बेलामा प्रश्न सोधेको हुँ । मनमोहन सिंहलाई पनि प्रश्न सोधेको छु । पाएँ भने बाराक ओबामालाई पनि प्रश्न सोध्छु । मैले नेपालले कहिले वल्र्डकप ट्रफी जित्छ भनेर सोध्नु कुनै गल्ती होइन । नेपालले कहिले एसियामा आधिकारिक मान्यता पाउँछ भन्ने प्रश्न के नाजायज हो
तपाईं क्रिकेट नै बुझ्नुहुन्न भन्ने आरोप लगाउनेहरूलाई के भन्नुहुन्छ ?
म क्रिकेट खेलाडी होइन । यसभन्दा पहिला रुचि राखेर हेरेको पनि थिइनँ । नेपालले खेलेको भनेर विश्वकपको एउटा म्याच टिभीमा हेरेको हुँ । क्रिकेट कसरी खेलिन्छ भन्ने मलाई सबै थाहा छ । ब्याटिङ, बलिङ गरेको राम्ररी बुझ्छु ।
सधैँ नेताहरूको अन्तर्वार्ता लिइरहेको मान्छे, खेलाडीको अन्तर्वार्ता लिन कत्तिको गाह्रो हुँदो रहेछ ?
मैले पहिले पनि खेलाडीको अन्तर्वार्ता लिएको छु । गणेश थापादेखि क्रिकेट खेलाडी शक्ति गौचनसँग पनि कुरा गरेको छु । मलाई कसैसित पनि अन्तर्वार्ता लिन अप्ठ्यारो लाग्दैन ।
पारस खड्काको जवाफ कस्तो लाग्यो त ?
उनको जवाफ पनि आफ्नो ठाउँमा ठिकै छ । त्यसमा मेरो कुनै कम्प्लेन छैन । सबै प्रश्नको जवाफ सोधिएकै अनुसार दिनुपर्छ भन्ने छैन । जस्तो मैले आज रिपोर्टर्स क्लबको कार्यक्रममा सूर्यबहादुर थापालाई संविधानको विषयमा सोधेको थिएँ । तर, उहाँले रिपोर्टर्स क्लबलाई शुभकामना दिनमात्र आएको हुँ भन्दै बोल्न मान्नुभएन । यो उहाँको अधिकारको कुरा हो ।
विश्वकप खेलेर आएका क्रिकेट खेलाडीलाई रिपोर्टर्स क्लबमा बोलाउनुहुन्न ?
बोलाउनुपर्ने त हो, तर मैले भ्याएकै छैन । खालि संविधान संविधान भनेर हिँडेको छु ।
तपाईंमाथि खनिएका मानिसहरूलाई के जवाफ दिन चाहनुहुन्छ ?
कसैले मलाई केही भन्दैमा जवाफ दिनैपर्छ भन्ने छैन । मैले बुझेको के हो भने म ‘राइट’ छु । सबैलाई जवाफ दिएर साध्य पनि छैन । त्यो खालि आफू हलुका हुनु हो ।
तपाईंकी श्रीमतीले फेसबुकमा कानुनी प्रक्रियामा जाने चेतावनी दिइरहनुभएको छ । तपाईंसित सल्लाह गरेरै हो कि ?
होइन । उनले आफ्नो हिसाबले लेखेकी होलिन्, मैले पढेको छैन । तर, सीमा नाघेर गालीगलौज गर्नेहरूमाथि साइबर क्राइममा जान सक्छु ।